Gwakọtara Silica ala, China Efere ala, Kamroller, gwakọtara Silica Products - Kamroller
Ọzọ Efere akpụzi na Product
Mmadụ Bịa na anyị Company
ỌZỌ seramiiki ebu na ngwaahịa
Kamroller Glass Annealing ala
Mma mma ma belata na-akwụ ụgwọ Site budata mbenata ìgwè sulfate, ọ bụ ike iji nweta ihe mma na àgwà nke iko na a gụnyere ya ná scrap ọnụego ya dị ka e jiri ya tụnyere nchara ala. The gwakọtara silica ala nwere oké ala thermal conductivity na bụ nhọrọ kasị mma maka ịchịkwa annealing usoro, na-enyere ala-deformation iko enweghị microcracks na ala nchegbu ma ọ bụ ọbụna iko rịbọn. · Ezigbo elu, mfe na-emeso tin ma ọ bụ tin oxide The fu ...
Silicon ígwè ala annealing ala
Ji elu àgwà sịlịkọn ígwè mpempe akwụkwọ mmepụta Silicon ígwè annealing rollers na-adabara achọ annealing Filiks dị ka ígwè n'ichepụta. Ọ na-eji na-ebu ọrụ annealing nke elu okpomọkụ sịlịkọn ígwè mpempe akwụkwọ, na okpomọkụ nso bụ 600-950 ° C. The ala table e mere na-izute usoro chọrọ ma na-na-eji na njikọ na Kamroller si proprietary patented aro ọgwụgwụ technology, hụ ire ụtọ na prediktebul nnyefe. Na n'elu r ...
Gwakọtara Silica ala maka akpakanamde akụkụ anneal ...
Na akpakanamde ụlọ ọrụ, Kamroller awade a dịgasị iche iche nke nkenke mmiri na ngwaahịa. Ruru akwa n'ibu ike na magburu onwe thermodynamics na ọkụ Njirimara nke egbuke, akpakanamde emepụta na akpaaka akụkụ-emepụta na-esiwanye eji seramiiki ihe kama nke ọla. Anyị na-arụ ọrụ na ndị ahịa anyị ịzụlite pụrụ ịtụkwasị obi, inogide na ala na-eri mmiri. Anyị na-enye rollers maka zọ ite-ọku uku na akpakanamde akụkụ, na-amị fechaa akpakanamde akụkụ t ...
Gwakọtara silica efere
Automotive ekwe akpụ ebu
KAMROLLER Ewepụghị njiko ngwaahịa
High Ọcha gwakọtara Silica Raw Ihe
KAMROLLER® bụ ụwa na-eduga emeputa nke elu-tech ceramik kemgbe 1988. Na United States na China, ụlọ mmepụta ihe na oru inye àgwà ngwaahịa na ọrụ ndị ahịa gburugburu ụwa.
Shanghai Road, Xinyi Economic - Technological Development Mpaghara, Xuzhou City, Jiangsu Province, China